अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘महाअभियोग रोक्न नै सुशीलासँग भेट्न खोजेको थिएँ’
१९ बैशाख - दुई सम्मानित संस्था आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहनुपर्छ र दुई संस्थाबीच तिक्तता नहोस् भनेर व्यक्तिगत रूपमा मैले विश्वासको वातावरण बनाउन खोजेको हुँ। मेरो प्रयत्न सार्थक हुन्छ कि भनेर मैले उहाँलाई भेट्न चाहेको थिएँ। उहाँले भेट्न चाहनुभएन। त्यसमा मेरो कुनै...
‘भारत–चीनबीचको पुल बन्दा नेपाल नो म्यान्स ल्यान्ड बन्नसक्छ’
१५ बैशाख - ओबरलाई हामीले स्वागत गनुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ र हाम्रो आफ्नो विकास रणनीति र अर्थराजनीतिक बाटो पनि मौलिक ढंगले तयार गर्नुपर्छ। यस्ता आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अभियानहरूबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ।
२५ चैत - नेपाली चलचित्र जगतमा राजेश हमाल बहुचर्चित र लोकप्रिय नाम हो। अघिल्लो दुई दशकसम्म चरित्र अभिनेताका रुपमा हमालले नै ठूलो पर्दामा एकछत्र स्थान बनाए। अहिले पनि उनी सक्रिय कलाकार हुन्। पछिल्लो समयमा धेरै चलचित्रकर्मी र अन्य कलाकारहरु राजनीतिक पार्टीमा...
'मेरो उम्मेदवारी साना तथा मझौला उद्योगीको अधिकारका लागि'
३० फागुन - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा ठूला व्यवसायीले मात्रै नेतृत्व गरेका छन्। १३ प्रतिशतले मात्रै राज गरेका छन्। तर, महासंघमा ८७ प्रतिशत बाहुल्य रहेको जमात नेतृत्वमा पुग्ने कि नपुग्ने? त्यसको जवाफ १३ प्रतिशत जमात भएकासँग मागिरहेको छु। र अर्को कुरा के हो...
‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको उपादेयता अझै छ’
२९ फागुन - 'प्रचण्डले निर्वाचन नगरी छाड्दिन भन्नुभएको छैन। हामी सबै मिलेर निर्वाचन गरौं। निर्वाचन गरेपछि म छाड्छु भन्नु भएको थियो। यदि निर्वाचन नगर्ने हो भने पनि म छाड्छु। मलाई आपत्ती छैन, तपाईंकै नेतृत्वमा तीन चरणका निर्वाचन गराउँदा पनि मलाई आपत्ती छैन भनेर...
‘राज्यको ज्यादती रोक्न मेरो उम्मेदवारी’
२७ फागुन - विगत १० वर्षदेखि चेम्बर आन्दोलनमा लागेका शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २९ गते हुने चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिँदै छन्। गोल्छा महासंघलाई साना, मझौला तथा ठूला व्यापारीको साझा संस्थाको रुपमा परिचित गराउन निरन्तर...
‘वातावरण मिलाए १४ हैन २८ खर्ब लगानी नेपाल भित्रिन्छ’
२३ फागुन - झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई सहज नबनाइ सुख्खै छैन। यदि अहिलेको कानुनलाई यथावत रुपमा राख्ने हो भने, हामीले सोचे जस्तो समृद्ध देश बन्न सक्दैन। वैदेशिक लगानी ल्याउन र देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन अहिले देखिएका कानुनी अड्चनलाई नफुकाइ हुँदैन।...
‘नेपाल–भारत सम्बन्धको उतारचढाव दाजुभाइको झगडाजस्तै हो’
१८ फागुन - नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसीलाई भारतीय सेनामा भर्ती लिने भारत सरकारको कुनै नीति छैन। यस्तो सम्भावना पनि म देख्दिनँ। यसको कारण त म भन्न सक्दिनँ। अर्कोतिर भारतीय सेनामा नेपालबाट भर्ती लिने क्रम पहिलेको तुलनामा धेरै कम हुँदै गएको छ। यो...
‘संशोधन विधेयक न पास हुन्छ, न फेल’
१६ फागुन - मधेशलाई पहाडबाट छुट्याउनेबित्तिकै स्रोतका आधारमा कमजोर प्रदेश बन्न जान्छ। त्यसैले यो मधेश र मधेशी जनताको हित विपरीत छ भन्ने हाम्रो अडान हो। एमाले देशमा सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। कहाँ मधेश र मधेशी समुदाय विरोधी हौं? देशलाई माया गर्ने...
'नेपाल र भारतबीचको रेलवे परियोजनामा चीनलाई जोड्न जरुरी छैन'
९ फागुन - नेपाल र भारतबीचको रेलवे परियोजनामा चीनलाई जोड्न जरुरी छैन। चीनको मामिला अलग हो। म तपाईंलाई के बताउन चाहन्छु भने नेपाल र भारतबीचमा एक युनिक सम्बन्ध छ। त्यसको तुलना अरु देशसँग हामी गर्न चाहन्नौं। श्रीमतीसँग अरु महिलाको तुलना गर्न सक्दैन। त्यस्तै...
‘निर्वाचन गराउन नसके प्रचण्डले सरकार छाड्नु हुन्छ’
७ फागुन - नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पटक–पटक अर्थमन्त्री भइसकेका अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन्। प्रष्ट विचार राख्ने नेताका रूपमा परिचित महतसँग संविधान कार्यान्वयनका जटिलता, कांग्रेस–माओवादी सहकार्य र मधेसी मोर्चालाई मूलधारमा ल्याउनेबारे केन्द्रित भएर...
‘स्वाभाविक रुपमा म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ’
२४ माघ - ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणाबारे सरकारले हामीसम्म कुरा ल्याइपुर्याएको छ। तपाईंहरु पनि सहयोगी बन्नुस् भनेर सरकारले आग्रह गरेको छ। हामी एनआरएन साथीहरु आफैँ पनि समूह बनाएर ठूला जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न सक्षम छौँ। त्यसैले आगामी दिनमा...
‘निर्वाचनका कारण एमाले संशोधनका पक्षमा आउँछ’
२३ माघ - सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ १० भित्र गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ। संविधान संशोधन विधेयक थाँती राखेर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरु पारित भइसकेका छन्। तर अझै पनि मधेसी मोर्चा र सरकारबीच स्थानीय निर्वाचनबारे सहमति हुन...
‘क्यान इन्फोटेकले मान्छेलाई अपग्रेड गर्छ’
१६ माघ - विश्व बलामीले लामो समयदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएका छन्। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका महासचिव समेत रहेका बलामी यसपालिको मेलामा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास र प्रर्दशनी भएको दाबी गर्छन। टच कनेक्ट प्रालिका कार्यकारी निर्देशक...
‘प्रमुख तीन दल नै संविधान असफल बनाउने खेलमा छन्’
१६ माघ - मधेशी मोर्चालगायतको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा छ। सँगै, प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र)बीचको सहमतिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अघि बढाइएको छ। सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणाको...
२५ पुस - सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित ९ दलले १४ मंसिरयता लगातार संसद् अवरोध गरिरहेका छन्। तर, विरोधकै बीच संसदले संशोधन विधेयकको प्रक्रिया बढाएको छ। यसकै सेरोफेरोमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर...
‘चेङ्दुसँग मित लगायौँ, सम्बन्धको ढोका खुल्यो’
२२ पुस - शहरहरुका बीचमा सम्बन्ध स्थापना हुने बित्तिकै जनताका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। विद्युत, व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बन्छ। हामीले चेङ्दु शहरसँग भगिनी सम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्दा वाणिज्यसहित आठवटा विषयमा हस्ताक्षर गरर्यौँ। भगिनी...
‘यस्तै अवस्था रह्यो भने निर्वाचनबारे केही भन्न सकिन्न’
१९ पुस - दलहरुले निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा यसको मुख्य सरोकारवाला निकाय निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव भने मौजुदा स्थितिको मूल्याङ्कनमा लागेका छन्। संविधान लागू गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय...
१३ पुस - म नेपाल सरकारलाई यति मात्र भन्छु– जस्ट फोकस अन रोड, रोड एन्ड रोड। जब रोड बन्छ त्यसपछि बल्ल हामी रेललगायतका अन्य कुराहरु हेर्न सक्छौँ। पूर्वाधार सरकारले बनाउनै पर्छ। जब पूर्वाधारको अभाव हुन्छ, यो देशमा निराशा मात्रै हुनेछ।
‘प्रचण्डलाई भनेका छौँ, सरकार धरापमा परे एमालेसँग आउनोस्’
११ पुस - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव फेल गरिदिनुहोस् पनि भन्नुहुन्छ। पास नगराउने हो भने यो प्रस्ताव नै किन ल्याइएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन।
३ पुस - कुलमान घिसिङ भाग्यमानी मान्छे हुन्। उर्जा मन्त्रीसँग उनको गति र सोच मिल्यो, लोडसेडिङ अन्त्य त्यसको प्रतिफल हो। अर्कोतिर मौसमले पनि साथ दिएको छ। अहिले जसरी भएपनि काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेको छ, म पनि खुशी छु। अरु सबै खुशी छन्। अब उपत्यका बाहिर पनि...
‘सरकारमा गएर जागिर खाने रहर छैन’
६ मंसिर - संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाक संयोजक छन्। सरकारले मधेसी र जनजातिका माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने अन्तिम तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यादव सरकारमा जाने कुरा चर्चामा छ। यिनै...
‘चीनतिर हाम्रो भाषा र भिसाको पर्खाल छ’
३ मंसिर - हामी सबैलाई थाहा छ– अघिल्लो वर्षको नाकाबन्दीले हामीलाई एकातिर मात्र निर्भर हुनु राम्रो होइन भन्ने महसुस गरायो। त्यसैले उत्तरी नाका खोल्न जरुरी भयो। यो त्रिदेशीय अवधारणामा आधारित छ। त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीले मात्र नेपालमा विकास गर्न सकिन्छ।
२९ कार्तिक - आउँदो बीस वर्षभित्र मेट्रो परियोजना सम्पन्न गर्न सकेमा काठमाडौंको स्वरूप नै फेरिने छ। राजधानीले बृहत रूप लिएमा उपत्यकाको स्वरूप मात्र हैन, आर्थिक र सामाजिक रूपमा कायापलट हुनेछ। यसले ठूलो रोजगारको अवसर पनि विस्तार गर्छ। दक्ष जनशक्ति र अरु कामदारको...
‘भारत अझै हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा–घेरा ठान्छ’
२५ कार्तिक - भारतमा एउटा तप्का आफै स्वतन्त्र ढंगले जानुपर्छ, एसियालाई केन्द्रमा राखेर एसियाकै सभ्यता, संस्कृतिलाई बढावा दिएर जानुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्छ। अर्को तप्का अन्ततः चीन नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले पश्चिमा शक्तिसँग जोडेर आफू शक्तिशाली हुनुपर्छ,...
‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा कुनै सहयोग सम्झौता हुँदैन’
१६ कार्तिक - यो भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी हुनु उपयुक्त होइन। हामीले यसलाई सद्भाव र मित्रता सरकारी तहमा भन्दा पनि जनस्तरमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हामी नेपाली पाहुनाको सत्कारका लागि संसारमै परिचित छौं, त्यो पहिचानलाई कायम राख्नुपर्छ। कुनै...
‘लोकमानमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अब रोकिँदैन’
९ कार्तिक - सभामुखको हैसियतले मैले यो प्रक्रिया सफल वा विफल के हुन्छ भन्न मिल्दैन। तर महाअभियोगको प्रक्रिया त अब अगाडि बढिसक्यो। मैले भनेर पनि अब यो रोकिँदैन।
७ कार्तिक - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सबैका नजर सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसतिर सोझिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि यही विषयमा केन्द्रित छ। यसै सेरोफेरोमा कांग्रेसका...
५ कार्तिक - लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने निर्णयबाट माओवादी पछि हट्दैन्। अब महाअभियोग लगाएरै छाडिन्छ। सबैलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल गरिरहनु भएको छ। अब महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प कसैसँग पनि छैन।
२७ असोज - चीनले असोज २४–२६ गते आयोजना गरेको सातौं स्याङ्ग शान मञ्चमा सहभागी हुन बेइजिङ आएका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले मंगलबार चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग भेटेर दुई पक्षीय सैन्य सहयोगबारे छलफल गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यसमेत रहेको...